အဆိုပါ Lego Batman Movie 70901 Mr. Freeze Ice Attack ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
08 / 02 / 2017 20 / 06 / 2017 Justin Winn 1424 Views စာ0မှတ်ချက် Batman, DC ကရုပ်ပြ, DC ကသူရဲကောင်းများ, မစ္စတာ Freeze, ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ Lego Batman Movie,
ဒီကနေသေးငယ်တဲ့အစု Lego Batman ရုပ်ရှင်ကားကြည့်သည် Batman သူ့ကိုအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ mech-suit ဝတ်ဆင်ထားသည့်သူ၏ရန်သူဟောင်းကို Mr.
စျေးနှုန်း: £ 19.99 / $ 19.99 / € 24.99 (DE) အပိုင်းပိုင်း: 201 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်စုတွင်အသစ်အဆန်းကိုကြိုတင်မျှော်လင့်ထားပါသည် Lego Batman ရုပ်ရှင်နှင့် Collectible Minifigure စီးရီးနှင့်နှစ် ဦး စလုံး၏ဖြန့်ချိ အသစ်အစုံ ဖြန့်ချိသည့်နေ့မတိုင်မီပျက်ပြယ်ဖြည့်ရန်ကူညီပေးသည်။ ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ကောင်းမွန်သောအစုံများစွာရှိသည်။ သို့သော်ယင်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုလော။
ဒါကတဝက်ကိုတည်ဆောက်တာပါပဲ။ ပထမပိုင်းတစ်ဝက်ကငါတို့ရဲ့သူရဲကောင်းရဲ့လူသွားလူလာများပါ Batmanလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်စက်ရုံနောက်ခံ။ ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးတွေ့မြင်ခွင့်ပဲ Batmanသီးခြား p အဖြစ် 's utility ကိုခါးပတ်art ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမယ့်အစားအဲဒါကိုစိတ်မပျက်စေဘူး။ ဒါဟာအခြားငါ၏တစ် ဦး မှအလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ခဲ့သော box ထဲမှာအားလပ်ချိန်မှာ utility ကိုခါးပတ်ကိုကြည့်ဖို့လည်းတကယ်ကိုနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ် Batman သေးသေးလေး။ လုံခြုံရေးအစောင့်သည်တင့်ကား၊ သံခမောက်လုံးနှင့် visor တပ်ဆင်ထားသည်။ ပုံမှန်နှင့်မျက်စိကန်းသောထိတ်လန့်စရာဖြစ်စေသောအသုံးအနှုန်းများကိုဖော်ပြရန်ခေါင်းကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ပုံနှိပ်ထားသည်။
စက်ရုံမြင်ကွင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အဆင်ပြေသွားသည်၊ သို့သော်စစ်ပွဲများအကြားရှိကော်ဖီတစ်ခုအတွက်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုထက်အခြားအရာများ၏ဖွင့်နိုင်မှုကိုထပ်မထည့်ပါ။ ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်ဤအစုသည် 70900 Joker Balloon Escape နှင့် 70910 Scarecrow Special Delivery နှင့်ပေါင်းစပ်ကြောင်းအကြံပြုသည့်စာမျက်နှာတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် p ကိုသုံးနာရီအတွင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။artGotham Energy ၏ပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေး၏ဒုတိယတစ်ဝက်သည် Mr. Freeze minifigure နှင့်သူ၏ mech-suit သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားစဉ် ပို၍ ကျေနပ်စရာကောင်းသည်။ အများစုအတွက်ဒီအစု၏အယူခံဝင်ရင်ဘတ်ပန်းကန်နှင့်ဖန်ခုံးတပ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးတာနဲ့တကယ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သောမစ္စတာ Freeze minifigure အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အေးခဲသေနတ်များ၏တည်ဆောက်ပုံသည်လည်းပျော်စရာကောင်းပြီးကောင်းမွန်သော p ကိုအသုံးပြုသည်artထိပ်ပေါ်မှာ stud သေနတ်သမားနှင့်အတူ s ။
အဆိုပါ mech- ဝတ်စုံကိုတည်ဆောက်ခြင်း p ကိုလေးစားမှုနှင့်အတူအကြွင်းမဲ့အာဏာမွေ့လျော်သည်art အသုံးပြုမှုနှင့်အတွေ့အကြုံတည်ဆောက်။ အပြာ / အဖြူရေပိုက်များသည်အံသြဖွယ်ကောင်းပြီးရောင်ခြည်သေနတ် p ကိုများစွာအသုံးပြုသည်art သောဤတည်ဆောက်မှု၏ခြုံငုံဗေဒမှထပ်ပြောသည်။ ဘောလုံးနှင့် socket အဆစ်များနှင့်အပြာရောင်ဘွတ်ဖိနပ်များကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုထားသည်။ ကျွန်တော့်ကိုအထင်ရှားဆုံးကတော့ဒီဝတ်စုံဝတ်စုံဟာဘယ်လောက်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသလဲဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ငါးနှစ်အရွယ်သားလေးကဒီစက်ကိုနာရီပေါင်းများစွာကစားခဲ့ရပါတယ်။ အပူတိုက်ပွဲများရှိနေသော်လည်းအတူတကွ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် Mr. Freeze Ice Attack သည်အိတ်တစ်လုံးသာဖြစ်သည်။ သို့သော် mech-suit သည်၎င်းကိုကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်အခြားဒြပ်စင်များမရှိသောနေရာတွင်အလွယ်တကူကစားနိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
70901 မစ္စတာ Freeze Ice Attack မှယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
အဆိုပါ Lego Batman ရုပ်ရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ 10, ရုပ်ရှင်ရုံ၌တည်ရှိ၏ Lego Batman Movie, Lego အစုံ၏အကွာအဝေး မှာဝယ်ယူရန်လက်ရှိရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
ပုံမှန်ပြန်စစ်ဆေးပါ Brick Fanatics ဘို့ အများကြီးပို LEGO Batman ရုပ်ရှင်nt ။
← LEGO NINJAGO Move ပထမဆုံးနောက်တွဲယာဉ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
အဆိုပါ Lego အခမဲ့ Batman Times နှင့်အတူ Polybag ရုပ်ရှင် →